Iza no mahazo tombony amin'ny fiatoana amin'ny asa mifandraika amin'ny fanakatonana ireo sekoly? Raha manan-jo handoa azy ianao, manao ahoana ny habetsaky ny fotoana sy ny tambin-karama?
Posted by Tranquillus | Mar 21, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Azo antoka fa manontany tena amin'ny tenanao ianao izao. Raha tsy maintsy mitazona ny zanako any an-trano aho ary tsy azo atao ny miasa amin'ny Internet. Inona ny mekanika napetraky ny governemanta amin'ireo toe-javatra rehetra ireo?
Tsy afaka telecommute ianao ary hikarakara zaza latsaky ny 16 taona.
Ny governemanta dia nametraka mekanika miavaka miaraka amin'ny fiantohana aretina amin'ny fiatoana amin'ny asa. Ny zanakao dia matetika no voakasiky ny fepetra famonoana ankehitriny.
Manan-jo amin'ity fialan-tsasatra atypical ity ianao ary amin'ny alalana isan'andro.
Raha latsaky ny 16 taona ny zanakao:
- Tsy azoko atao ny miasa lavitra dia adidinao ny hampiato ny hetsika rehetra hitaizana ny zanakao.
- Ny zanakao dia tsy ampy 16 taona amin'ny andro voatondro hiatoana.
Raha 16 taona na mihoatra ny zanakao ny zanakao dia tsy hanan-karama ianao. Ankoatra ny zaza latsaky ny 18 taona. sembana, nianatra amina haino aman-jery manokana amin'ny fotoana mahazatra.
Mandra-pahoviana no fiatoana an'ity asa ity?
Ny fialan-tsasatra izay havoaka aminao dia mety haharitra 14 andro kalandrie. Midika izany fa tsy maintsy manisa 14 andro ianao, anisan'izany ny faran'ny herinandro manomboka amin'ny fikarakarana ny fialan-tsasatra. Fanambarana vaovao dia tsy maintsy atao isaky ny 14 andro mandra-pahatapitry ny fotoana fitanana. Iray amin'ireo ray aman-dreny roa ihany no afaka mahazo tombony amin'ity fitaovana ity. Azo atao ihany anefa ny mizara azy eo amin'ny ray sy ny reny ary koa indraindray mba hampisaraka azy.
HAMAKY Manorata ankizy ao amin'ny sekoly frantsay
Inona avy ireo dingana tokony hatao?
Amin'ny maha mpiasa anao, dia tsy manana dingana hafa ianao raha tsy amin'ny fampandrenesana ny mpampiasa anao. Handefa ny fampahalalana ilaina rehetra amin'ny CPAM ny mpampiasa anao. Raha ny tena izy dia fanontaniana iray ilazana ny hoe tsy mahay telefaonina, ianao voatahiry ao an-trano. Ny mpiasa amin'ny rafi-pitantanana ankapobeny dia tafiditra amin'ity mekanika ity. Ity rafitra ity dia tsy mihatra amin'ny manampahefana amam-panjakana sy olona miankina amin'ny paikady manokana. Ny olona miasa tena dia mikarakara ny fanaovana fanambarana ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana.
Rahoviana ianao no hanangona ny karamanao?
Manomboka amin'ny fotoana anaovan'ny mpampiasa anao ny fomba fiasa ao amin'ilay tranokala nomena an'io. Azonao omena alalana isan’andro, alalàn'ny fijerena fiantohana ara-pahasalamana. Eny tokoa, ireo karamanao karama dia tsy maintsy ampitaina arakaraka ny fomba mahazatra. Ny fotoana nangonina sy hametrahana izany fampahalalana izany dia mety ho lava na ho fohy kokoa noho ny toe-javatra misy ao amin'ny faritra misy anao. Teboka mahaliana hotadidina, hotsarainao mandritra ny andro rehetra iainana. Tsy misy andro tsy fahampiana ary tsy misy fisavana momba ny fanokafana ny zonao.
Ohatra mail Fampijaliana ny fikarakarana ankizy any an-trano.
Indro misy ohatra ofisialy, tsotra, taratasy fanamarinana alefa any amin'ny mpampiasa anao amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny namany Sary. Raha tianao dia azonao atao ny mandefa izany miaraka amin'ny fanekena ny fandraisana amin'ny fampiasana ny serivisy an-tserasera avy amin'ny paositra.
Amin'ny faniriana, manantena ny fiverenako haingana be ao amin'ny lahatsoratro, aforiko, araka ny nifanarahana, ny mari-pahaizana ho an'ny fikarakarana ny zanako.
HAMAKY Tambin-karama sy fialan-tsasatra
Hitako anao tsy ho ela
Fihetsika ny fikarakarana ankizy eny an-trano
Izaho, izay mitondra ny lohateny hoe "Anarana voalohany Faritry ny mpiasa" dia manamarina fa ny zanako "Anaran'ny anarana voalohany amin'ny zaza", efa "taona zaza" dia efa voasoratra ao amin'ny fananganana "Anaran'ny fananganana" ny kaominina "Anaran'ny kaominina", mihidy mandritra ny "daty" ka hatramin'ny "daty" ho fitantanana ny areti-mifindra coronavirus.
Manaporofo aho fa izaho irery no ray aman-dreny mangataka fijanonana ho an'ny mpiasa mba hahafahako mihazona ny zanako ao an-trano.
Natao tamin'ny "daty" tamin'ny "daty"
"Anarana voalohany Anaran'ny mpiasa"
Iza no mahazo tombony amin'ny fiatoana amin'ny asa mifandraika amin'ny fanakatonana ireo sekoly? Raha manan-jo handoa azy ianao, manao ahoana ny habetsaky ny fotoana sy ny tambin-karama? 22 Novambra, 2020Tranquillus
Teo alohaManomàna hafatra tsy misy alalana ho an'ny fialan-tsasatra
manarakaCoronavirus sy hetsika ampahibemaso, 84% amin'ny karamanao no homena anao.
Fanavaozana ny Reconversion na fampiroboroboana ny fianarana momba ny asa (Pro-A).
Nahoana no mipetraka sy miasa any Frantsa?
Inona no maha samy hafa ny karama net sy ny karama fototra?
Inona no atao hoe hetra fitazonana?